–निनाम कुलुङ ‘मंगले’ चोमोलुङमा चढ्नेहरुको शानको कुरो गर्दा सन् २०१९ मे मा सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाऊँपालिका थामेका कामीरिता शेर्पाले एकै सिजनमा दुई पटक चोमोलुङमा चढेका थिए भने उनले सो वर्ष २४ औं पटक सफलताका साथ सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा चढेका थिए । समयले साथ दिएमा भविश्वमा अभैm ५÷६ पटकसम्म सगरमाथा चढेर ३० औं पटकसम्म पनि सगरमाथा चढ्ने सफलता पाउन् भनी यो पंक्तिकारको अग्रिम शुभकामना छ । हुन त त्यसभन्दा पहिले सबैभन्दा धेरै पटक (२१ पटकसम्म) सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा चढेर आप्पा शेर्पाले विश्व कीर्तिमान राखेका थिए । त्यसो त सबैभन्दा पहिले बिना अक्सिजन १० औं पटकसम्म सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा चढेर कीर्तिमान राख्ने पहिलो आरोही आङरिता शेर्पा हुन् । जसले बिना आर्टिफिसियल अक्सिजन चोमोलुङमा चढेका थिए भने माथि उल्लेखित तीनैजना प्रतिभाहरु सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाऊँपालिका थामो (थामे) का हुन् । वास्तवमा हामी नेपालीहरुले मानव पँुजी भनेको के हो ? बुभ्mने भएको भए स्वर्गीय बाबुछिरी शेर्पा, स्वर्गीय आङरिता शेर्पा, बाबुछिरी शेर्पा, आप्पा शेर्पा, कामीरिता शेर्पा लगायत नेपालका सयौं–हजारौं शेर्पाहरु प्रति उपेक्षा भाव राख्ने थिएनौं ! तापनि स्वर्गीय आङरिता शेर्पा, स्वर्गीय बाबुछिरी शेर्पा, आप्पा शेर्पा, कामीरिता शेर्पा लगायत नेपालका हजारौं शेर्पाहरु नेपाल देश र नेपाली जनतहरुका लागि अमूल्य निधिहरु हुन् ।
यसरी हेर्दा एकपटक सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा चढेर नाम राख्नकै लागि विश्वभरिका मान्छेहरु लाखौं अमेरिकी डलर खर्च गरेर आउँछन् भने हाम्रै देश नेपालका कामीरिता शेर्पाले २४ औं पटक, आप्पा शेर्पाले २१ औं पटक, आङरिता शेर्पाले १० औं पटक चढेर पहिलो कीर्तिमान बनाए भने, ११ आउ भने, ैं पटक, १२ औं पटक, १३ औं पटक, १४ औं पटक, १५ औं पटक, १६ औं पटक, १७ औं पटक, १८ औं पटक, १९ औं पटक, २० .. औं …, २१ … चढ्ने शेर्पारु त कति कति ! यसरी हेर्दा सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा चढ्नु कति गौरवशाली छ ?, सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा चढ्दा कति ख्याति कमाईन्छ ?, कति इज्जत कमाइन्छ ? कति नाम कमाइन्छ ?, कति दाम पनि कमाइन्छ ?, अनि कति मान–सम्मान पाइन्छ ? भन्ने त स्वयम् चढेर सफलता पाउनेहरुले नै जान्ने कुरो भयो ।
सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा आरोहणको रेकर्ड राख्ने सन्दर्भमा भन्ने हो भने, यसअघि नै सबै भन्दा वृद्धा, सबैभन्दा कम उमेर, क्यान्सर रोगी, दुवै हात नभएको, दुवै खुट्टा नभएको, अपाङ्ग, अन्धा, महिला, विवाहित विदेशी जोडी, विवाहित नेपाली जोडी, बेलुनिङ गर्ने, स्कीइङ गर्ने, नेपाली पत्रकार, विदेशी पत्रकार, महिला पत्रकार, पुरुष पत्रकार, एक्लै चढ्ने, २० घण्टा सगरमाथाको शिरमा बसेर समय बिताउने, बिना अक्सिजन चढ्ने, भेजेटेरियन, एडस् रोगी, किताब विमोचन, गीति एल्बम विमोचन गर्ने आदिका अनेकौं रेकर्डहरु सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा चढ्ने क्रममा स्थापित भैसकेको छ । सफलतापूर्वक आरोहण गरेर फर्केपछि आफूले १९ पटक सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा आरोहण गर्नुमा रेकर्ड राख्ने कुनै मनसाय नरहेको सार्वजनिक रुपमै बताई सकेका छन् । उनको उमेरलाई हेर्दा उनले चाहेमा अझै केहीपटक सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा आरोहण गर्न सक्छन् । स्मरण रहोस्, हालसम्म अन्य आरोहीहले पनि १४ पटक भन्दा बढी चढीसबेका छन्
जे होस्, सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा आरोहणको कुरो गर्दा सबभन्दा पहिले चोमोलुङमा अर्थात् सगरमाथा चढ्ने प्रयास् सन् १९२१ मा बृटिश आर्मीका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल चाल्र्स हवार्ड बरिको नेतृत्वमा भएको थियो । तर उनीहरुले सफलता पाउन सकेनन्, चोमोलुङमामा पहिलो मृत्यूवरण गर्ने नागरिक पनि बृटिश नागरिक डा. ए.एम. कल्लस हुन् । उनी १९२१ को बृटिश टोलीमा सदस्य थिए । चोमोलुङमामाथि विजय सन् १९५३ मे २९ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा नेपाल र एडमण्ड हिलारी न्यूजिल्याण्डले गरे । उनीहरु बृटिश टोलीमा सहभागी भएका थिए भने उक्त टोलीको नेतृत्व वृटिश नागरिक लर्ड जोन हन्टले गरेका थिए । पहिलो पटक एक्लै चोमोलुङमा चढ्ने श्रेयचाहिं रेनहोलड मेस्नर इटलीलाई जान्छ । उनले सन् १९८० मे १९ मा उक्त सफलता हात लाए । जसको नेतृत्वचाहिँ पोलिश नागरिक एन्डेजेज स्वाडाले गरेका थिए । उत्तर दिशाबाट पहिलोचोेटि चोमोलुङमा चढ्ने श्रेयचाहिं चिनिया नागरिकहरु वाङ फु चोउ, गोम्पा र चु यिङ हाउलाई जान्छ । उनीहरुले १९६० मा उत्तरी दिशाबाट चोमोलुङमा सफलता पूर्वक चढेका थिए ।
पहिलो महिला चोमोलुङमा आरोही बन्ने सौभाग्यचाहिं जापानकी जुन्को ताबेईलाई जान्छ । उनले सन् १९७५ मे १६ मा सफलतापूर्वक चोमोलुङमा शिखरको चुचुरो चुमेकी थिइन् भने उनी सम्मिलित दलको नेतृत्व मिचिओ युआसाले गरेका थिए । त्यस्तै नेपाली प्रथम चोमोलुङमा महिला आरोही पासाङल्हामु शेर्पा हुन् भने धेरैपटक चोमोलुङमा चढ्ने महिला ल्हाक्पा शेर्पा हुन् । उनले ८ पटकसम्म पटकचोमोलुङमाको आरोहरण गरिसकेका छन् । चोमोलुङमा शिखरको चुचुरोमा धेरै समय बिताउने श्रेय पनि नेपाली पर्वतारोही स्वर्गीय बाबुछिरी शेर्पाले पाएका छन् भने पहिलो पटक एकै सिजनमा दुईपटक चोमोलुङमा चढ्ने श्रेय पनि बाबुछिरीलाई नै जान्छ । तर दुःखको कुरा बाबुछिरी जस्तो चोमोलुङमा आरोहणमा बहुप्रतिभाको धनी अहिले हाम्रो सामू भौतिक रुपमा छैनन् । त्यस्तै सबैभन्दा कम उमेरमा चोमोलुङमा चढ्ने श्रेय पनि नेपालीले नै पाएको छ । सन् २००१ मे २३ मा चोमोलुङमा चढ्दा तेम्बा छिरी शेर्पाको उमेर १५ वर्ष १८ दिनको थियो भने उनी भन्दा अघि पनि नेपालकै शम्भू तामाङले १८ वर्षको उमेरमा चोमोलुङमा चढेर रेकर्ड राखेका थिए । यद्यपि वहाँले उक्त आरोहण कान्छो आरोहीको रेकर्ड राख्न नभई तल्लो भेगकाले चढ्न सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रयास गरेका थिए तर सफल भएको बताउनुहुन्छ । त्यस्तै वहाँले सन् १९८५ मा उत्तरी मोहडाबाट पनि आरोहरण गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी शिखरबाट प्याराग्लाइडिङ गर्ने प्रथम चोमोलुङमा आरोही फ्रेन्च नागरिक जिन मार्क बोइभिन हुन् उनले सन् १९८६ मा चोमोलुङमाको चुचुरोबाट प्याराग्लाइडिङ गरेका थिए । मान्छेको इच्छा पनि अनेक खाले हुन्छ त्यस्तै स्कि खेलेर चोमोलुङमाको चुचुरोबाट तल झर्ने कामचाहिँ स्लोभेनियाका दाभो कानीकारले गरे । उनले सन् २००० अक्टोबर ७ मा चुचुरोबाट स्कि खेलेर आधार शिविर झरेका थिए । चोमोलुङमा चढ्ने र कीर्तिमान कायम गर्ने काम सवलांगले मात्र होइन अन्धा अपाङ्गले समेत गरेका छन् । सन् १९९८ मे २७ मा टम ह्विटकर नामक अमेरिकी अपाङ्ग नागरिकले चोमोलुङमाको चुचुरोमा पुगेर अपाङ्गहरुले पनि अवसर पाएमा सपाङ्ग सरह काम गर्न सक्षम हुन्छन् भनेर प्रत्यक्ष देखाइदिए । त्यस्तै नेपाली अपाङ्ग आरोही ङवाङ शेर्पाले पनि चोमोलुङमा आरोहण गरी नेपाली अपाङ्गहरु पनि कम छैनन भनी देखाइदिए । त्यस्तै यहुदी मूलका इरिक वेइनमेयर नामक अन्धो अमेरिकी नागरिकले पनि सन् २००१ मा संसारकै छानो चोमोलुङमाको शिखरमा पुग्न सफल भएर दृष्टि भएर पनि दृष्टिदोष भएकाहरुका लागि उनी एक चुनौती भए अर्थात आँखा भएर पनि अन्धो बन्न विवशहरुलाई उदाहरणीय काम गरेर देखाए र प्रेरणाको स्रोत बन्न सके । रेकर्ड राख्ने क्रममा प्रथम विवाहित जोडीमा दर्ज हुने अवसर भने युगोस्लाभियाका एन्ड्रेज र मारियाले पाएका छन् । उनीहरुले सन् १९९०, ७ अक्टोबरमा सगरमाथाको सफलतापूर्वक आरोहण गरेका थिए । यसैगरी समुद्रदेखि चोमोलुङमाको चुचुरोसम्म अर्थात सी टू समिट गर्ने श्रेय चाहिं अष्ट्रेलियाली नागरिक टिम म्याकार्टनी स्नेपले सन् १९९० मा पाएका छन् कलकतादेखि पैदल यात्रा गर्दै चोमोलुङमाको चुचुरोसम्म पुगेका थिए । त्यस्तै नेपालका स्व. लोप्साङ जाङ्बु शेर्पाले विभिन्न पहिरनमा चोमोलुङमा े चढ्नेको नाम दर्ता गराएका थिए । उनले शेर्पा पहिरन, दौरा सुरुवाल र कराँते खेलमा लगाइने पहिरनमा चढेका थिए । यसरी हेर्दा पहिलो पटक चोमोलुङमा चढ्नेहरुको एकै दिन ठूलो भीड अर्थात एकै दिनमा धेरै व्यक्तिले चढेको दिन हो, –सन् २००२ मे १६ । जुन दिन ६१ जनाले एकै दिनमा सगरमाथा चढेका थिए । यिनीहरु सबैले नेपालको बाटो भएर चढेका थिए । त्यस्तै एकै वर्षमा धेरै आरोहीहरुले चोमोलुङमा चढेको पहिलो वर्षचाहिँ सन् १९९३ हो । जुन वर्ष १२९ जना आरोहीले चोमोलुङमा चढेका थिए । त्यसपछि यो वर्षको वसन्त ऋतु (सन् २०१९ मे) मा हो । जुन भीडमाथि विश्वभरिकै सर्वसाधारण मान्छेहरुको समेत ध्यान खिचेको÷पुगेको थियो भने सगरमाथाको अस्तित्व चीरकालसम्म कायम रहोस् ! भनी सान्तवना दिने धेरै वातावरणवित्हरुले सो भीडमाथि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । भलै अरु सिजनमा जस्तो सबै दिन मौसम खुल्ला नभएर यो सिजनमा एक दिन मात्रै मौसम खुल्ला वा भनौं आरोहीहरुका लागि अनुकूल भएकोले एकै दिन धेरै आरोहीहरु चोमोलुङमाको चुचुरोमा पुगेका हुनाले ट्राफिक जाम हुन पुगेको थियो भने केही आरोहीहरुले सोही कारण ज्यानसमेत गुमाएका थिए ।
जे होस्, उमेर र लिङ्गको हिसावले सबैभन्दा पाको उमेरकी महिला आरोहीमा दरिने महिला पनि जापानकी तामा वान्तानावे हुन् । सन् २००२ मे १६ मा चोमोलुङमा चड्दा उनको उमेर ६३ वर्ष भएको थियो । उत्तर–दक्षिण दुबै दिशाबाट आरोहण गर्ने प्रथम महिला रसियाकी क्यान ओ डोड हुन् । उनले सन् १९९६ मे २५ मा दक्षिणबाट र सन् १९९९ मा उत्तर तर्फबाट चोमोलुङमा चढेकी थिइन् । चोमोलुङमामा एकपटकमा धेरै आरोहीहरुको दुःखद् मृत्यू भएको वर्षचाहिँ सन् १९९६ हो । जुन वर्ष १५ जना आरोहीहरुको दुःखद् निधन भएको थियो । सबैभन्दा ठूलो आरोहण दलचाहिं चिनियाहरु हुन् । सन् १९७५ मा ४१० जना सदस्यहरु सम्मिलित टोलीले चोमोलुङमा चढेको थियो ।
कीर्तिमान राख्ने सिलसिलामा नेपाली पत्रकार आङछिरिङ शेर्पाले नेपालको प्रथम पत्रकारको रुपमा चोमोलुङमा चढे भने सबभन्दा पाको उमेरमा चढेर ७० वर्षीय जापानीज युचिरो मिउराले रेकर्ड तोडेका थिए । उनका छोरोले पनि संगै सगरमाथा चढेर बाबुछोरा आरोहीको रेकर्ड पनि बनाएका थिए । उक्त रेकर्ड नेपालकै ७७ वर्षीय शेरचनले तोडे । जे होस्, त्यसअघि पाको उमेरमा चोमोलुङमा चढ्न सफल नागरिकमा दरिएका जापानीज नागरिक तोमियासु इसिकावा हुन् उनले सन् २००२ मे मा ६५ वर्षको उमेरमा चढेका थिए । उता कीर्तिमान राख्ने होडमा नेपालका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले पनि प्रयास गरेका थिए । तर, उनले सगरमाथाको आधार शिबिरमै देह त्यागेका थिए । होस्, कीर्तिमानकै क्रममा सबभन्दा छिटो १२ घण्टा ४५ मिनेटमा पेम्बा दोर्जे शेर्पाले चोमोलुङमा चढेको ५ दिनपछि लाक्पा गेलु शेर्पाले १० घण्टा ५६ मिनेटमै सफल आरोहण गरे । त्यसलाई पनि माथ गर्दै अर्को वर्ष उनका प्रतिद्वन्द्वी पेम्बा दोर्जे शेर्पाले ८ घण्टा १० मिनेटमा चोमोलुङमा चढेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरे । तर, पछि उजरी परेपछि सो कीर्तिमान नेपाल सरकारले खारेज गर्यो । उता हालसम्मकै सबभन्दा कान्छी आरोही मिङकिपा शेर्पाले १५ वर्षको उमेरमा तेम्बाछिरीको कीर्तिमान भंग गरे । तर, कीर्तिमानको क्रममा अनेक विकृतिहरु पनि देखिन थालेपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५९ चैत्र १८ गते सोह्र वर्ष मुनिकालाई नेपालको बाटो भएर आरोहण गर्न नदिने नियम लागू गरेको छ ।
अन्तमा सबैभन्दा पहिले बिना आर्टिफिसियल अक्सिजन १० औं पटकसम्म सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा चढेर कीर्तिमान राखेका पहिलो आरोही स्वर्गीय आङरिता शेर्पाप्रति मेरो हादिर्क श्रद्घा–सुमन छ ।
थप केही बुभ्mनु परेः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
प्रकाशित मिति ११ आश्विन २०७७, आईतवार १०:४३